IHuawei P Smart Z: Uyilo, amanqaku kunye nexabiso elivelisiweyo | I-Androidsis
Umvelisi waseAsia uyaqhubeka nokutshayela zonke iiterminal azenzileyo. Sele sikubonisile izibonelelo zeflegi yayo emva Hlalutya i-Huawei P30 Pro, kwaye ngoku sinalo lonke ulwazi lwemodeli entsha. Sithetha ngayo IHuawei P Smart Z, isixhobo esime ngaphandle kuqwalaselo lwekhamera.
Kwaye, okokuqala ngqa kwimodeli yenkampani esekwe eShenzhen, sifumana imodeli yokubheja kwikhamera ebuyisekayo ukunqanda inotshi kwiscreen seHuawei P Smart Z. Masibone zonke iinkcukacha zale nto imodeli.
Le iya kuba yiHuawei P Smart Z enekhamera ebuyisekayo
Ukuqala, sifumana ifowuni eyenziwe ngezinto ezintle: iglasi enomsindo kunye nealuminium zezona zinto ziphambili ezibumba isisu semoto esi sixhobo saphakathi kuluhlu esifika nobukhulu obungaqhelekanga embindini wenkampani yaseTshayina: 163.5 x 77.3 x 8.9 mm kunye nobunzima obuyi-197 gram. Ukuba yena IHuawei P Smart Z Iya kuba sisixhobo esikhulu kwaye sinzima.
Nangona kuyinto eqhelekileyo ukusukela, ukuba sithathela ingqalelo idatha ehluziweyo, isikrini sayo siyakwenziwa Iphaneli ye-intshi eyi-6.6 Itekhnoloji ye-IPS kunye nesisombululo esipheleleyo se-HD + esine-19.5: 9 ratio, eyenza iHuawei's P Smart Z ibe yifablet epheleleyo. Ngaphantsi kwe-hood yale terminal siza kufumana iprosesa yaseKirin 710 kunye ne-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcinwa kwangaphakathi, esinokuthi sikwazi ukubanakho ukwandisa ngekhadi layo le-microSD.
Lumka, esi sigxina siya kuba nefayile ye- I-4.000 mAh ibhetri, ngaphezulu kokwaneleyo ukuxhasa ubunzima obupheleleyo bezixhobo zeHuawei P Smart Z. Kwaye asinakulibala ikhamera yayo ye-megapixel eyi-16 engaphambili ene-2.0 aperture, eya kuthi ibe nemoto encinci ukuyenza isebenze ngokuzenzekelayo xa ibeka imo ye-selfie. Ikhamera ephambili? Ewe sine-sensor ezimbini ezinee-megapixels ezili-16 kunye nokuvula okungu-1.8, ukongeza kwisenzi sesibini se-2 megapixel sensor ene-2.4 egxile ekuvuleni. Asinakuyiqinisekisa le datha yokugqibela, kodwa ngokokuvuza, i Ixabiso leHuawei P Smart Z eYurophu Ingangama-euro angama-220. Ukuba yinyani, sijamelene nolunye lwezona zikhetho zinomdla kwintengiso ngaphakathi koluhlu lwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Huawei P Smart Z icocwe ngokupheleleyo ngokumangalisayo kuyilo lwekhamera yayo